Georgetown | Wararka Safarka
Sawir | Kristopher Anderson Wikimedia Commons
Markii hore Georgetown waxay ka go'nayd badhtamaha Washington oo sannado badan waxay ahayd hoyga diblomaasiyiinta iyo dadka ka shaqeeya dawladda laakiin, u dhowaanshaha caasimadda iyo kordhinta tirada dadka, waxay ku dhammaatay inay noqoto mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan xaafadaha caasimada.
Waxay ku taal bariga magaalada dhinaca Glover Park, oo aad ugu dhow Dupont Circle iyo Foggy Bottom waa xaafadda Georgetown. Waxaa lagu gartaa jidadkeeda qurxan, qaab dhismeedkeedii qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad iyo isku darka wanaagsan ee duugga iyo kuwa cusub. Wadooyinka waxaa ka buuxa nolol jawiguna waa mid saaxiibtinimo badan.
Waxaa lagu aasaasay bangiyada Webiga Potomac 1751, magaalada Georgetown ayaa ka horreysay aasaaskii Washington, iyadoo noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee Maryland illaa ay ku biirtay Degmada Columbia. Sidaa darteed, xaafadani waxay leedahay taariikh aad u xiiso badan oo aad ku baran karto socod socod lug ah oo aad ku marayso jidadkeeda, adigoo ka fiirsanaya guryaha quruxda badan ee reer Georgia iyo guryaha lebenka leh
Socodkaaga agagaarka xaafadda, u tag Xarunta booqashada ee Georgetown ee ku taal wadada Thomas Jefferson si aad u soo qabato khariidad oo aad u baartid xilliga firaaqadaada, ama aad ku tagto booqasho hagitaan bilaash ah duhurkii inta lagu jiro xagaaga. Sidan ayaad ku ogaan doontaa dhismaha ugu da'da weyn Washington, Old Stone Houde, oo ku taariikhaysan 1765 muuqaalkiisana aan isbeddelin. Maanta waa matxaf dadweyne oo leh qolal lagu qurxiyay qaabkii gumeysiga ee dabaqadda dhexe.
Booqasho kale oo qiimo leh waa Naadiga Magaalada Tavern, oo ah meeshii aabayaashii aasaasay ee Mareykanku ay inta badan ka casheeyeen.: George Washington, Thomas Jefferson iyo John Adams.
Sidoo kale Tudor Place House iyo Garden, oo ah meel uu lahaa nin ay qaraabo yihiin George Washington halkaas oo aad ka arki karto in ka badan 8.000 oo farshaxan iyo alaab guri laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad ka dibna aad ku dhex mari karto labada hektar ee jardiinooyinka quruxda badan.
Meel kale oo xiiso u leh booqashada magaalada Georgetown waa guriga loo yaqaan 'Custom House' iyo 'Post Office', oo ka mid ah dhismeyaasha xafiisyada ugu horreeya ee laga dhiso Mareykanka.
Sawir | Marjord Wikimedia Commons
Meel aan ka fogeyn xarunta booqdayaasha sidoo kale waxaa ku yaal Chesapeake iyo Canal Ohio (C&O) ee Webiga Potomac, oo isku xira magaalooyinka Washington DC iyo Cumberland (Maryland) intii u dhaxeysay 1831 iyo 1924. Waxaa loo dhisay in lagu qaado dhuxusha, alwaax iyo alaabooyin kale. sida waddo kale oo loo maro Potomac, taas oo u socota isbarbar socda kanaalka. Habka ugu wanaagsan ee lagu barto kanaalka waa baaskiil lagu raaxeysto marinnada biyo mareenka ee taariikhi ah, guryaha la xiro iyo kuwa wax lagu shiido.
Dhinaca kale, qiyaastii seddex kiilomitir u jirta magaalada hoose ee Washington waa Jaamacadda Georgetown, xarunta ugu da'da weyn ee aqoonta Katooliga ee Mareykanka oo la aasaasay 1789.
Marka lagu daro meelo badan oo taariikhi ah oo xiiso leh, Georgetown sidoo kale waa goob wanaagsan oo laga adeegto oo laga helo cunno wanaagsan dukaamada iyo maqaayadaha gaarka ah, gaar ahaan waddooyinka Wisconsin iyo M. Maaha wax aan caadi ahayn in lala kulmo muusikiistayaasha jidadka iyo bandhigyada bannaanka.
Haddii kale, waad booqan kartaa Georgetown's parkside park si aad u heshid raaxo nasasho leh adoo raacaya aragtida Wabiga Potomac.
Cunto jaceyl ah meel gaar ah, iskuday 1789 Restaurant, makhaayad taariikhi ah oo ku taal wadada Georgetown ee xasilloon, ama isku day Beeraleyda, Kalluumeysatada, Bakeeriyaasha, makhaayad ku taal hareeraha biyaha oo diiradda saaraya joogtaynta Inta lagu jiro bilaha kuleylka sanadka, makhaayadaha ku yaal Georgetown Waterfront dhamaantood waa ciil, iyagoo bixiya fadhiga banaanka oo leh aragtiyo wanaagsan oo webiga Potomac ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Georgetown
Xagee laga cunaa Madrid? 9 makhaayadood oo lagu taliyo magaalada